गर्मी भएर तीन वर्षकी छोरी लिएर आँगनमा बसेकी थिइन् चन्द्रा, एकै छिनमा भयो दुवै जनाको मृत्यु – Krazy NepaL
गर्मी भएर तीन वर्षकी छोरी लिएर आँगनमा बसेकी थिइन् चन्द्रा, एकै छिनमा भयो दुवै जनाको मृत्यु
May 25, 2021 850
काठमाडौ । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा हात्तीले आमाछोरीको ज्यान लिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको जंगली हात्तीले आमा छोरीको ज्यान लिएको हो । सोमबार बेलुकी गेरुवा गाउँपालिका – १ सरखोलकी ३७ वर्षीया चन्द्रा विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । गम्भिर घाइते भएकी उनकी तीन बर्षीया छोरी दिपिकाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
गर्मी भएका कारण सोमबार साँझउनीहरु घर बाहिर बसेका थिए । त्यही बेलामा आएको हात्तीले आ क्र म ण गरेको गेरुवा गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष दयाराम थारुले बताए । उपचारका लागि लैजादै गर्दा ३ वर्षकी छोरीको मृत्यु भएको थियो । गर्मीका कारण घर बाहिर आँगनमा बसिरहेका उनीहरुलाई सोमबार बेलुकी ९ बजेतिर हात्तीले ज्यान लिएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय शान्तिबजार र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठसहितको टोली मंगलबार विहान घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेको छ ।काठमाडौ । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा हात्तीले आमाछोरीको ज्यान लिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको जंगली हात्तीले आमा छोरीको ज्यान लिएको हो ।
सोमबार बेलुकी गेरुवा गाउँपालिका – १ सरखोलकी ३७ वर्षीया चन्द्रा विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । गम्भिर घाइते भएकी उनकी तीन बर्षीया छोरी दिपिकाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । गर्मी भएका कारण सोमबार साँझउनीहरु घर बाहिर बसेका थिए ।
त्यही बेलामा आएको हात्तीले आ क्र म ण गरेको गेरुवा गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष दयाराम थारुले बताए । उपचारका लागि लैजादै गर्दा ३ वर्षकी छोरीको मृत्यु भएको थियो । गर्मीका कारण घर बाहिर आँगनमा बसिरहेका उनीहरुलाई सोमबार बेलुकी ९ बजेतिर हात्तीले ज्यान लिएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय शान्तिबजार र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठसहितको टोली मंगलबार विहान घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेको छ ।
Prevमुलुकभर ८ हजार ६३६ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, १६९ को मृत्यु
Nextयी ४ काम गर्ने घरमा सधैँ गर्छिन् लक्ष्मी माताले बास, हुँदैन् कहिलै धनको अभाव
कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? भूलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती
किन अचानक बन्द भयो राष्ट्रपति कार्यालयको ट्विटर?
नेकपा एमालेका नेता लेखराज गौतमको अल्पायुगमै नि’ध’न
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (42783)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (22517)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17581)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15041)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13088)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (12457)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (11836)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (11767)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (11644)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11171)
फेसवाश होइन यस्ता कुराहरुले धुनुहोस् अनुहार, पाइनुहुनेछ चमक !
पेटमा बोसो लाग्न थाल्यो ? त्यसो भए यी खानेकुरा खानुस्, पेटमा बोसो पगाल्नुस् !
कोठा नदिएको भन्दै घर’बेटीलाई मु”द्धा हालेपछि,
काठमाडौंको आकाशमा देखिएको सर्वसाधारणलाई अनौठो लाग्ने यो दृष्य, जस्ले धेरैको ध्यान खिच्यो